Thwebula OneNote 15.1.6319.4426 – Vessoft
Lwamancoko – a notebook in a yohlelo digital. Isofthiwe yenzelwe ukwakha uhlu, ukufingqa, amanothi kahle mayelana noma ngekhanda. Lwamancoko kwenza ukuvumelanisa idatha namanye amadivayisi lapho isicelo efakwe. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukufometha amanothi, bahlele besebenzisa izincwadi, izigaba futhi tags. Lwamancoko kwenza ukwengeza amafayela izithombe, alalelwayo noma ividyo inothi bese ukuyifunda kanye nabangani.
Indalo esikahle uhlu, ukufingqa kanye namanothi
Data ukuvumelanisa phakathi Amadivayisi ezahlukene
Ukucinga by angukhiye noma imishwana
Ikhono ukwabelana amanothi nabangani
Amazwana on OneNote:
OneNote Ahlobene software: